ट्यूटोरियल - Creativos अनलाइन | Creativos अनलाइन (पृष्ठ २)
Procreate ब्रश कसरी डाउनलोड गर्ने
यदि तपाइँ प्रोक्रिएट ब्रशमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाइँ निम्न पोष्टलाई छुटाउन सक्नुहुन्न जहाँ हामी तिनीहरूलाई कसरी र कहाँ डाउनलोड गर्ने भनेर वर्णन गर्दछौं।
इन्स्टाग्राममा फन्ट कसरी परिवर्तन गर्ने
इन्स्टाग्राम फन्ट परिवर्तन गर्नु सधैं असम्भव कार्य जस्तो देखिन्थ्यो। यस पोष्टमा, हामी तपाईंलाई सरल चरणहरूको साथ एक ट्यूटोरियल देखाउँछौं।
यदि तपाइँ भिडियो सम्पादनमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ निम्न ट्यूटोरियल छुटाउन सक्नुहुन्न जहाँ हामीले भिडियोलाई धेरै भागहरूमा कसरी विभाजन गर्ने भनेर व्याख्या गर्छौं।
गोथिक अक्षरहरू सधैं उपस्थित छन् आज पनि तिनीहरू आधुनिकीकरण गरिएको छ। यस पोष्टमा हामी तिनीहरूलाई कसरी डिजाइन गर्ने भनेर वर्णन गर्दछौं।
हटाउनुहोस् ब्याकग्राउन्ड उपकरणको साथ ३ सजिलो चरणहरूमा Word मा छविको पृष्ठभूमि कसरी हटाउने भनेर जान्नुहोस्। यो पोस्ट नछुटाउनुहोस्!
के तपाइँ व्हाट्सएपको लागि स्टिकरहरू कसरी बनाउने सिक्न चाहनुहुन्छ? हामी यसलाई गर्ने दुई तरिकाहरू व्याख्या गर्छौं र हामी तपाईंलाई विकल्पहरू दिन्छौं। तिनीहरूलाई पत्ता लगाउनुहोस्!
सर्कलमा छवि कसरी काट्ने
छविहरू क्रपिङ सधैं सजिलो भएको छ। के तपाईलाई थाहा छैन कि तपाई यसलाई विभिन्न तरिकामा गर्न सक्नुहुन्छ। यस पोष्टमा, हामी कसरी वर्णन गर्छौं।
छविमा पाठ घुसाउनुहोस्
एक पाठ सधैं विभिन्न ग्राफिक समर्थन मा सम्मिलित गर्न सम्भव भएको छ। यस पोष्टमा, हामी चित्रहरू प्रयोग गरेर यसलाई कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्दछौं।
GIF कसरी काट्ने
यदि तपाईंले पहिले नै सोच्नुभएको छ कि तपाईंलाई GIF ढाँचाको बारेमा सबै कुरा थाहा छ भने, यस ट्यूटोरियलमा, हामी तपाईंलाई चरणहरू देखाउँछौं, जहाँ तपाईं सजिलैसँग GIF काट्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईलाई JPG ढाँचाबाट पाठ निकाल्न आवश्यक छ भने, यस ट्यूटोरियलमा, हामी यसलाई सरल चरणहरूमा कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्छौं।
Tik Tok मा फिल्टर कसरी परिवर्तन गर्ने
Tik Tok फिल्टरहरू प्रयोगकर्ताहरूले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने उपकरणहरू मध्ये एक हो। यस पोष्टमा हामी तिनीहरूलाई चरण-दर-चरण कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर वर्णन गर्छौं।
GIMP मा GIF कसरी बनाउने
GIMP मा GIF कसरी बनाउने थाहा छैन तर एउटा सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ एक साधारण बनाउनको लागि तपाईंले चाल्नु पर्ने कदमहरू छन्।
व्यावसायिक पोर्टफोलियो कसरी बनाउने
यदि तपाइँ ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जोसँग अझै व्यावसायिक पोर्टफोलियो छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्, यो कसरी गर्ने भन्ने बारे केही सुझावहरू यहाँ छन्।
Adobe कसरी अपडेट गर्ने
ताकि तपाईले Adobe बाट सुरक्षा र स्थिरता सुधारहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, यहाँ हामी तपाइँलाई Adobe कसरी सजिलै अपडेट गर्ने भनेर देखाउँछौं।
कसरी GIF मा भिडियो रूपान्तरण गर्ने
Gifs एक धेरै रमाइलो स्रोत हो जब यो अन्य मान्छे संग च्याट गर्न को लागी आउँछ। सजिलैसँग भिडियोलाई GIF मा रूपान्तरण गर्ने तरिका पत्ता लगाउनुहोस्।
कसरी आफ्नो छविहरू कच्चा बाट cr2 मा परिवर्तन गर्ने
हामी तपाइँलाई तपाइँको छविहरू कसरी cr2 बाट कच्चा मा रूपान्तरण गर्ने भनेर सिकाउँछौं। हामीले सिफारिस गर्ने उपकरणहरूको सहज ह्यान्डलिङको साथ तपाईंको लागि यो जटिल हुनेछैन।
फोटोशप मा कोलाज कसरी बनाउने
के तपाइँ फोटोशप मा एक कोलाज बनाउन को लागी जान्न चाहानुहुन्छ? यहाँ हामी तपाइँलाई कुञ्जीहरु छोड्छौं ताकि परिणाम तपाइँ प्राप्त गर्नुहोस् सबैभन्दा राम्रो मध्ये एक हो।
इलस्ट्रेटर मा एक ढाल कसरी बनाउने
जान्नुहोस् कसरी Illustrator मा एक ढाँचा सजीलै ती रचनाहरु को लागी तपाइँ प्रयोगकर्ताहरु लाई कैद गर्ने उद्देश्य संग बाहिर लैजानुहुन्छ।
ग्राफिक डिजाइन को इतिहास
के तपाइँ कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि कसरी ग्राफिक डिजाइन को बारे मा आयो? यो पोस्ट मा क्लिक गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई यसको विकास र कुन आन्दोलनहरु देखा पर्नेछ।
प्रभाव पछि, एक लोगो मात्र चीज तपाइँ गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ अनगिन्ती परियोजनाहरु छन् कि तपाइँ एक अद्वितीय फिनिश दिन सक्नुहुन्छ।
फोटोशपमा कसरी एक साधारण तस्वीर असेंबल बनाउने
एक उदाहरणको साथ, म तपाईंलाई फोटोशपमा साधारण फोटोमोंटेज कसरी बनाउने भनेर देखाउन जाँदैछु केहि उत्कृष्ट टचहरू लागू गर्दै। यसलाई नभुल्नुहोस्!
यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई क्यान्भामा युट्युबका लागि थम्बनेलहरू कसरी बनाउने देखाउँदछौं र हामी तपाईंलाई केही धेरै व्यावहारिक विचारहरू दिन्छौं। यसलाई नबिर्सनुहोस्!
यदि तपाईंलाई pdf मा छवि सम्मिलित गर्न आवश्यक छ र तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन भने, हामी तपाईंलाई केही विकल्पहरू दिन्छौं ताकि तपाईं यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ।
यस पोष्टमा तपाइँले फोटोशपमा मकअप कसरी गर्ने भनेर पत्ता लगाउनुहुनेछ र तपाइँ कुनै पनि प्रकारको वस्तुमा लागू गर्ने प्रविधिहरू सिक्नुहुनेछ। यसलाई नछुटाउनुहोस्!
यस पोस्टमा हामी तपाईंलाई फ्रान्सेली इन्डेटेसन वर्डमा कसरी राख्ने, चरण-चरण र म्याक र विन्डोजमा प्रक्रिया अनुकूलन गर्ने देखाउन हामी तपाईंलाई अवलोकन गरिरहेका छौं।
फोटोशपमा पानीको रंग प्रभाव कसरी बनाउने
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई फोटोशपमा पानीको रंग कसरी प्रभाव पार्ने भनेर सिकाउन जाँदैछु। यो धेरै सरल छ र यो राम्रो देखिन्छ। पोष्ट पढ्नुहोस् र प्रयास गर्नुहोस्!
यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाईलाई भन्छौं कि कसरी फोटोलाई पेन्सिल रेखाचित्रमा रूपान्तरण गर्ने। फोटोशपमा कसरी ड्राइ effect प्रभाव पार्ने भनेर जान्नको लागि पोष्ट पढ्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई pdf कम्प्रेस गर्नु आवश्यक छ र तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन भने, हामी तपाईंलाई केही कार्यक्रमहरू र वेबसाइटहरू दिन्छौं जहाँ तपाईं सजीलै र केही सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुनेछ।
के तपाइँसँग धेरै PDF हरू छन् र pdf सँगै राख्नु पर्छ? तिमीलाई थाहा छैन यो कसरी गर्ने? हामी तपाईंलाई प्रोग्रामहरू र अनलाइनको साथ कुञ्जीहरू दिन्छौं ताकि तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
के तपाईं फोटोशपमा र colors्ग कसरी उल्टाउने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ? यसलाई सजिलैसँग कसरी गर्ने सिक्नको लागि हामीले तपाईंको लागि तैयार गरेका सामग्रीहरू हेर्नुहोस्।
फोटोशपमा तहहरूले कसरी काम गर्दछ
यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाईंलाई भन्दछौं कि परतहरू के हुन् र कसरी उनीहरू फोटोशपमा कार्य गर्छन्, चरण-चरण र जटिलता बिना। यो नछुटाउनुहोस्!
एडोब फोटोशपमा दुई तस्बिरहरू कसरी मिलाउने
यस पोष्टमा म तपाईंलाई देखाउँछु कि कसरी फोटोशपमा दुई फोटोहरूको रंगलाई एक सरल र प्रभावशाली ट्रिकको साथ मिलाउन सकिन्छ। यसलाई नछुटाउनुहोस्!
फोटोशपको साथ कसरी तपाईंको ग्रन्ज बनावट बनाउने
के तपाईंलाई थाहा छ ग्रन्ज बनावट के हो? फोटोशप वा छवि सम्पादकको साथ सिर्जना गर्नका लागि के चरणहरू छन् पत्ता लगाउनुहोस् र जान्नुहोस्।
क्यान्भामा कसरी YouTube ब्यानर सिर्जना गर्ने, चरण-चरण
यस क्यान्भा ट्यूटोरियलमा म तपाइँलाई तपाइँको YouTube च्यानलको लागि एक रचनात्मक र आँखा पार्ने ब्यानर कसरी सिर्जना गर्ने भनेर देखाउँछु। यो पोष्ट याद नगर्नुहोस्!
Over० भन्दा बढी नि: शुल्क फोटोशप प्लगइनहरू र फिल्टरहरू
के तपाईलाई फोटोशप वा प्लगइनका लागि फिल्टर चाहिन्छ? एडोब प्रोग्रामको लागि यो फ्रि एड-अनहरूको सूची नभुल्नुहोस् जुन तपाईं अवश्य उपयोगी पाउनुहुनेछ।
फोटोशपमा स्मार्ट फिल्टरहरू कसरी लागू गर्ने
फोटोशपका स्मार्ट फिल्टरहरू तपाईंको फोटोहरूमा उल्टो परिवर्तन गर्नका लागि धेरै उपयोगी छन्। तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्!
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि फोटोशपको साथ किनारहरु सहज बनाउन को लागी? प्रोग्राम चरणको साथ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस् ताकि तपाईंको फोटोहरू अझ उत्तम छ।
एक लोगो कसरी बनाउने पत्ता लगाउनुहोस् र पक्षहरू जसमा तपाईले अधिक जोड दिनु पर्छ ताकि तपाईका परियोजनाहरू तपाईका ग्राहकहरूको लागि उत्तम हो।
यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाइँलाई तपाइँको PowerPoint मा कसरी भिडियो राख्ने भनेर देखाउँदछौं, हामी तपाईंलाई यसलाई गर्नका लागि धेरै तरिकाहरू देखाउँदछौं। थप जान्नको लागि पोष्ट पढ्नुहोस्।
यो फोटो पढेर तपाईको फोटोग्राफहरूको फ्रेमिंग सुधार गर्नुहोस् जसमा हामी तपाईलाई फोटोशपमा कसरी छवि क्रप गर्ने देखाउँदछौं।
Free 37 नि: शुल्क डिप्लोमा टेम्प्लेटहरू
कुनै पाठ्यक्रम, उत्सव वा अन्य कुनै अवसरमा डिप्लोमा दिनको लागि free 37 निःशुल्क डिप्लोमा टेम्प्लेटहरू। तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्नुहोस्!
फोटोशप प्रभावहरू छवि वा चित्रलाई परिमार्जन गर्न यसलाई अर्को जस्तो देखिने बनाउन प्रयोग गरिन्छ। तर ती कसरी गर्न सकिन्छ?
JPG छविलाई PNG मा कसरी रूपान्तरण गर्ने
यदि तपाइँ JPG छवि PNG मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ त्यहाँ विभिन्न विकल्पहरू छन् यसलाई प्राप्त गर्नका लागि। कुनले तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै विश्वस्त पार्दछ पत्ता लगाउनुहोस्।
कसरी फोटोशपमा किनारहरू चिकनी गर्ने र तपाइँको छनौट सुधार गर्ने
यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाईंलाई फोटोशपमा किनारहरू नरम पार्न र तपाईंको छनौट सुधार गर्न एक धेरै साधारण युक्ति सिकाउँछौं। यसलाई नछटाउनुहोस्!
Jpg मा pdf रूपान्तरण धेरै सरल छ। तपाईले प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर मात्र होईन, तर त्यहाँ बढि उपकरणहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई खोज्नुहोस्!
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई कसरी Adobe Photoshop मा फोटो को भाग pixelate गर्न, छिटो र सजिलो देखाउन। यो नछुटाउनुहोस्!
फोटोशपको साथ छविबाट वाटरमार्क हटाउने तरिकाहरू छन्। चरण-दर कसरी गर्ने भन्ने जान्न पोस्ट पढ्नुहोस्।
यस ट्यूटोरियलमा मँ तपाईंलाई लोगो डिजाईनका लागि आधारभूत इलस्ट्रेटर उपकरणहरू देखाउँदछ। तपाईं यो पोष्ट गुमाउन सक्नुहुन्न!
एडोब क्यामेरा कच्चा सुपर रिजोलुसन के हो: फुल एचडी छविहरू KK मा रूपान्तरण गर्नुहोस्
सुपर रिजोलुसनले 10MP देखि 40MP सम्म तस्बिरहरू बिना क्षति विना नै Adobe बाट उत्कृष्ट पहिलोको रूपमा विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ।
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई फोटोशपमा छाला सफा गर्ने कसरी भन्ने बारे म भन्न गइरहेको छु धेरै कृत्रिम नतिजामा नपरी। पोष्ट पढ्दै गर्नुहोस्!
ट्रेलोबाट एक ट्यूटोरियल पत्ता लगाउनुहोस् जसको साथ तपाईं यस प्रोग्रामबाट अधिक पाउन सक्नुहुनेछ र चालहरू जुन तपाईंलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईं फोटोशपमा छविको र colors्ग कसरी उल्टाउने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ वा कसरी नकारात्मक छवि बनाउने, यो पोष्ट पढ्न नबिर्सनुहोस्!
आज एक ब्लग मित्र को लागी धन्यवाद को सित्तै डाउनलोड गर्न कोरेल ड्रा X5 को पोर्टेबल संस्करण मैले पाए।
कसरी PowerPoint सँग प्रस्तुतीकरणहरू गर्ने
के तपाइँ PowerPoint को साथ प्रस्तुतीकरणहरू कसरी गर्ने भन्ने जान्न चाहानुहुन्छ? यस कार्यक्रमलाई नहेर्नुहोस् जुनमा हामी तपाईंलाई कार्यक्रमको उपकरणहरू देखाउँदछौं।
यस पोष्टमा म तपाईंलाई मुख्य ड्राइंग उपकरणहरू प्रदान गर्दछु जुन शब्दले प्रस्ताव गर्दछ। पढ्नुहोस् र प्रोग्रामको फाइदा उठाउन सुरू गर्नुहोस्!
यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाइँलाई फोटोशप प्रयोग गरेर कसरी छविको पृष्ठभूमि र change परिवर्तन गर्न सक्दछौं भनेर बताउने छ। यो चाल सिक्न पोष्ट पढ्नुहोस्।
यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाईलाई फोटोशपमा तपाईंको लोगो वा ब्रान्डको साथ सरल तरिकामा वाटरमार्क सिर्जना गर्न सिकाउनेछौं।
के तपाईं फोटोशपमा र change परिवर्तन गर्न सिक्न चाहानुहुन्छ? यो पोष्ट प्रविष्ट गर्नुहोस् र यो सजिलो र छिटो बनाउनको लागि एउटा चाल सिक्नुहोस्।
आजको पोस्टमा म तपाईंलाई क्यानभासँग आकर्षक प्रस्तुतिकरणहरू कसरी सिर्जना गर्ने र तपाईंलाई आफ्नो डिजाइनहरू सुधार्नको लागि सुझाव दिनको लागि सिकाउनेछु।
हामी तपाईंलाई व्यावसाय कार्डहरू बनाउन सहयोग गर्दछौं। अरूलाई छक्क पार्न उत्तम डिजाइनहरू प्राप्त गर्नका लागि चरणहरू सिक्नुहोस्।
यस पोष्टमा म तपाईंलाई छविहरू PNG ढाँचामा कसरी बदल्ने भनेर सिकाउनेछु र पृष्ठभूमि बिना फोटोशपको साथ PNG छविहरू सिर्जना गर्न म एक साधारण ट्यूटोरियल समावेश गर्दछु।
यस पोष्टमा म s० को दशकबाट क्लासिक पुनः प्राप्त गर्न चाहान्छु। म तपाईंलाई show सजीलो चरणहरूमा एडोब फोटोशपको साथ कसरी यथार्थपरक नियोन पाठ सिर्जना गर्ने भनेर देखाउने छु।
एडोब फोटोशपको साथ कसरी टी-सर्ट डिजाइन गर्ने
अडीब फोटोशप र मकअपहरूको साथ टि-शर्टहरू कसरी डिजाइन गर्ने, वास्तविकताको नजिक समर्थनमा तपाईंको शारीरिक डिजाइनहरू क्याप्चर गर्न।
एडोब इलस्ट्रेटरमा फाईलहरू व्यावसायिक तरीकामा कसरी निर्यात गर्ने भन्ने बारे फेला पार्नुहोस्, तपाईंको फाईलहरूको एक साथ निर्यात प्राप्त गर्न।
एडोब फोटोशपमा तहहरूले कसरी काम गर्दछ
यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाइँलाई भन्छौं कसरी तह र समूहहरूले Adobe Photoshop मा चरण-चरण र जटिलता बिना काम गर्दछन्। यसलाई नबिर्सनुहोस्!
प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी UVI वार्निश फाईल फोटोशपमा छिटो तपाईंको छपाई डिजाईनहरू चमकको साथ प्राप्त गर्नका लागि तयार गर्नुहोस्।
शास्त्रीय हात चित्रकलाको बारेमा अधिक सिक्नको लागि एउटा अपवाद पाठ्यक्रम संसारको सब भन्दा महत्वपूर्ण संग्रहालय, थाइसेन संग्रहालयबाट।
यदि तपाईंलाई थप छवि गहिराइको आवश्यकता छ भने, कि, तपाईंको डिजाइन फिट गर्न फ्लोर र पर्खाल विस्तार गर्न, चिन्ता नलिनुहोस्, हामी तपाईंलाई कसरी देखाउने छौं। हामीले सुरु गर्यौं!
तपाईं त्यो सहि पढ्नुहुन्छ, यो उपकरणले हामीलाई मात्र छविहरू सुधार गर्न अनुमति दिँदैन। यो सम्भावनाहरूको दायरा हो जुन तपाईले खोज्नु पर्छ। तपाईंको भिडियो सम्पादन गर्नुहोस्!
कसरी फोटोशप प्रयोग गरेर काठमा लोगोहरू स्ट्याम्प गर्ने
निश्चित रूपमा एक पटक भन्दा बढि तपाईले काठमा छापिएको लोगोको छविहरू देख्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई चरण-चरणमा फोटोशपमा कसरी गर्ने भनेर देखाउछौं।
हाम्रो डिजाइनको साथ एक फुटकर बिक्रेता: पign्क्तिबद्ध र वितरण
एलिमेन्ट्स बीच ठूलो परिशुद्धता प्राप्त गर्न केहि तरिकाहरू सिक्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण छ कि सबै केन्द्रित छ र एक अर्कासँग बाकस छ।
Amazon KDP प्रयोग गरेर पुस्तक डिजाइन र प्रकाशित गर्नुहोस्
Amazon KDP पुस्तकहरु प्रकाशन र बेच्न को लागी एक प्लेटफर्म हो। यो प्रदान गर्ने उपकरणहरूको बारेमा जान्नुहोस् र तपाईं कसरी प्लेटफर्ममा डिजाईन र सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ।
कुनै पुस्तकको पेटलाई प्रेस गर्न पठाउन तपाईंले यसलाई बचत गर्दा विचारहरूको श्रृंखला लिनु पर्छ। यहाँ हामी तपाइँलाई यो कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्नेछौं।
तपाइँ कसरी मुद्रण को लागी एक पुस्तक कभर कन्फिगर गर्नु पर्छ? हामी एक सरल तरीकाले सबै चरणहरूमा वर्णन गर्दछौं ताकि तपाईंसँग त्रुटिहरू बिना अन्तिम कला छ।
यस साधारण ट्यूटोरियलमा तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ कि कसरी लेख को लागी छविमा फिट गर्न सकिन्छ दृश्य दृश्य र अधिक आकर्षक लेखहरू सिर्जना गर्न।
पप आर्ट डिजाइनमा धेरै लोकप्रिय शैली हो। यो साधारण ट्यूटोरियलको साथ कसरी आफ्नै पप आर्ट छविहरू सिर्जना गर्ने सिक्नुहोस्।
InDesign मा कसरी Polaroid प्रभाव सिर्जना गर्ने सिक्नुहोस्
पोलोरोइड प्रभावमा बहुविध पोलोरोइड जस्तो देखिने बनाउनको लागि छवि सम्पादन गर्नु समावेश हुन्छ। यो ट्यूटोरियलमा कसरी गर्ने सिक्नुहोस्।
एडोब इलस्ट्रेटरमा फूलको व्यवस्था कसरी गर्ने सिक्नुहोस्, हालसालका वर्षहरूमा यस किसिमको डिजाइन यति फैशनेबल, एलेस बेलिस जस्ता डिजाइनरहरूलाई धन्यवाद।
कुनै पनी पृष्ठभूमिलाई seconds सेकेन्डमा र प्रयास बिना कसरी हटाउने
कृत्रिम बुद्धिको साथ यस वेबसाइटले सेकेन्डको एक मामलामा एक छवि को पृष्ठभूमि हटाउन सक्षम छ। धेरै सफलता।
यदि डाउनलोड मकअपहरू तपाईंको लागि उपयोगी छैनन् भने, तपाईं आफ्नै छविहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईलाई छवि बिगार्न सिकाउँछौं। पढिरहनुहोस्!
के तपाइँ पोस्टर वा पोस्टर सिर्जना गर्न आवश्यक छ? हामीसँग हड्ताल, रंगीन र प्रभावशाली डिजाइनहरूको साथ आउन धेरै ज्ञानको आवश्यक पर्दैन। हामी तपाईंलाई यो कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सिकाउँछौं।
फोटोशपमा साधारण चरणहरूको साथ ग्लिच प्रभाव
यस प्रभावलाई फोटोशप मार्फत प्राप्त गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। यस ट्यूटोरियलमा, म कसरी ग्लिच प्रभाव सरल र छिटो लागू गर्ने तरिका वर्णन गर्दछु।
फोटोशपको साथ फोटोको रंगहरू छिटो सच्याउनुहोस्, गुणस्तर फोटोग्राफहरू प्राप्त गर्दै जुन एक पेशेवर परिणाम प्राप्त गर्दछ।
एक ल्यापटप छनौट एक जटिल काम हो, यदि यो अधिक ग्राफिक डिजाइन को लागी हो भने। हामीले के हेर्नु पर्छ भनेर जान्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ ताकि गल्तीहरू नगर्नुहोस्। कसरी ल्यापटप डिजाइन गर्न छनौट गर्नुपर्छ? यहाँ खोज्नुहोस्!
फोटोशपको साथ रमाईलो प्रभाव बब्बल हेडहरू सिर्जना गर्न जुन तपाईं ती सबै परिवार र साथीहरूको फोटोहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं रमाइलो स्पर्शको साथ बाहिर खडा गर्न चाहनुहुन्छ। यस रमाईलो प्रभावको साथ फोटोशपको बारेमा थोरै जान्नुहोस्।
फोटोशपको साथ धुम्रपान प्रभाव टाइपोग्राफी जसले तपाईंलाई आवश्यक सबै ती पदहरूमा एक विशिष्ट स्पर्श थप्न अनुमति दिनेछ। अधिक पेशेवर तरिकामा फोटोशप ब्रशेसको साथ काम गर्न सिक्नुहोस्।
एन्डि वारहोल प्रभाव फोटोशपको साथ छिटो र सजिलोसँग, दृश्यात्मक आकर्षक छविहरू प्राप्त गर्ने यस प्रभावको सन्तृप्त रंगहरूको लागि धन्यवाद। यस पोष्टको साथ फोटोशपको बारेमा थोरै जान्नुहोस्।
लोगो डिजाइन गर्दा अवधारणाहरूको सूची सुनिश्चित गर्नुहोस् कि हाम्रो कर्पोरेट छवि एक पेशेवर र प्रभावी तरीकाले सही संचार गर्‍यो। सानो व्यावहारिक उदाहरण कल्पना गर्नुहोस्।
फोटोशपमा मल्टीकलर प्रभावको साथ फोटोग्राफी
फोटोशपमा बहुरंगी प्रभावको साथ सजिलो र छिटो फोटोग्राफी, र level्गको बलको लागि दृश्य स्तरमा धेरै आकर्षक परिणाम प्राप्त गर्न। वान्डरल्याण्ड शैलीमा शुद्ध एलिसमा छवि प्राप्त गर्नुहोस्।
फोटोशपमा चाँडै उच्च कुञ्जी प्रभाव
फोटोशपमा उच्च कुञ्जी प्रभाव छिटो र सजिलो तस्विरहरू प्राप्त गर्न जुन तिनीहरूको दृश्य अपीलको लागि अलग देखिन्छ। यो रमाईलो प्रभाव मास्टर फेसन फोटोग्राफी उद्योग मा एक धेरै प्रयोग।
दृश्य कमजोरी संसारमा २ 285 मिलियन मानिसहरूलाई असर गर्ने समस्या हो, एक पहुँच वेब डिजाइनले ती सबैको लागि जीवन सजिलो बनाउँछ। त्यसकारण हामीले खाली ठाउँहरू तिनीहरूलाई अनुकूलन गर्नै पर्छ। यहाँ हामीसँग कसरी हाम्रा वेबसाइटहरू र प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपकरणहरू डिजाईन गर्ने भन्ने बारे केही दिशानिर्देशहरू छन्।
कसरी छवि भेक्टरमाइज गर्ने
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ इलस्ट्रेटरको साथ छवि कसरी भेक्टरमाइज गर्ने? फोटोशप? वा हुनसक्छ तपाईंले यसलाई अनलाइन गर्न आवश्यक छ? हामी डिजाइनरहरूको कार्यलाई सजिलो पार्न कुनै पनि वातावरणमा यसलाई गर्ने विभिन्न तरिकाहरू देखाउन प्रयास गर्ने छौं
ट्र्याकि and र केरिन बीच typographic फरक
ट्र्याकिंग र केरनिंग बीचको टाइपोग्राफिक भिन्नता र यसको हेरफेरको क्रममा कसरी बुझ्न सकिन्छ कि टाइपोग्राफी कसरी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट काम गर्दछ र यसलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा व्यावहारिक तरिकामा लागू गर्दछ।
कसरी इंडिजइनमा पृष्ठ नम्बर मार्कर बनाउने
हाम्रो प्रोफेशनल प्रोजेक्टहरू लेआउट गर्नको लागि इंडिसाइनमा पृष्ठ नम्बर मार्कर कसरी सिर्जना गर्ने। पृष्ठ संख्या थप्न आधारभूत र आधारभूत केहि हो, तर तपाईं यो स्वतः गर्न सक्नुहुन्छ? यो पोष्टको साथ सिक्नुहोस्।
माध्यमिक र colorsहरूको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
प्राथमिक रंगहरू के हुन्? ती कसरी गठन हुन्छन्? माध्यमिक र colors्गहरू दोस्रो स्थानबाट आउँदछ, प्राथमिक र colors्गको बराबर भागको मिश्रणबाट र पिग्मेन्टेसन वा प्रकाशको मापदण्ड अनुसार फरक हुन्छ, वा समान सीएमवाईके वा आरजीबी वा आरवाईबीको पुरानो मोडेल के हो। यहाँ तिनीहरूको बारे सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
प्राथमिक रंगहरू के हुन्? हामी तपाइँलाई उनीहरूको बारेमा हाम्रो निश्चित गाईडमा बताउँछौं जसमा हामी तपाइँलाई देखाउँदछौं कि कुन रंगहरू मिलाउँदा तिनीहरू बाहिर आउँछन्, उनीहरूसँग के विशेषताहरू छन्, र wheel्ग पा wheel्ग्रा, कसरी प्राथमिक र with्गका साथ खैरो बनाउने र अधिक!
चलचित्र पोस्टर डिजाइन: रातो भँगेरा
चलचित्र पोस्टर डिजाइन सम्पूर्ण रचनात्मक संसार हो जहाँ डिजाइनरको फिगरले मौलिक भूमिका खेल्दछ। चलचित्र पोस्टर पछाडि के छ? हामी कसरी फोटोशपको साथ समान पोस्टरहरू सिर्जना गर्न सक्छौं? फोटोशपको साथ फिल्म पोस्टरहरू सिर्जना गर्न चरण-चरण जान्नुहोस्
फोटोशप चरण-चरणमा विज्ञापन ग्राफिक डिजाइन गर्नुहोस्
फोटोशपमा विज्ञापन ग्राफिक डिजाईन गर्नुहोस् पेशेवर तरीकामा यस डिजिटल रीचिंग प्रोग्राम को उत्कृष्टता को आवश्यक केही उपकरणहरू प्रयोग गरेर। व्यावहारिक चरणमा फोटोशप प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्।
सजिलैसँग प्रीमियरको साथ भिडियो ट्रान्जिसनहरू सिर्जना गर्नुहोस्
प्रीमियरसँग सजिलैसँग भिडियो ट्रान्जिसनहरू सिर्जना गर्नुहोस् केवल एक मिनेटमा यसको सहज अन्तर्वार्ताको लागि धन्यवाद तपाई आफ्ना भिडियोहरूको लागि पेशेवर प्रभावहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
Adobe Premiere को साथ भिडियोको समयलाई नियन्त्रण गर्न गर्न धेरै सजिलो छ र यसले धेरै रचनात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्दछ। द्रुत रचनात्मक सम्पादन सिक्नुहोस्।
हाम्रो फोटोग्राफहरूको साथ एंडी वारोल शैलीको साथ एउटा छवि सिर्जना गर्नुहोस्, एकदम सरल तरिकामा धेरै रचनात्मक र हडताल छविहरू प्राप्त गर्दै।
कसरी एक ग्राहकलाई एक अन्तिम कला डेलिभर गर्न सही र पेशेवर तरिकामा, प्रत्येक जुनियर डिजाइनरको विशिष्ट गल्तीहरूलाई बेवास्ता गर्दै।
फोटोशपको साथ कपालको र quickly्ग छिटो र सजिलोसँग बदल्नुहोस् ताकि तपाईं नयाँ विकल्प र धेरै स्ट्राइकि sty शैलीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
फोटोशपमा दृष्टान्त र color्ग गर्न र तपाईंको छविहरू व्यवसाय र धेरै सहज तरीकामा जीवनमा ल्याउने प्रविधिहरू।
फोटोशप प्रयोग गरेर यथार्थपरक फोटोमोंटेज सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईंको ग्राफिक प्रोजेक्टहरूको लागि फोटोशपको साथ एक यथार्थवादी फोटोमोंटेज सिर्जना गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं रचनात्मक र मूल परिणामहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
सजिलो र व्यावसायिक तरीकाले तपाईंको अडियोभिजुअल परियोजनाहरूको लागि Adobe Premiere का साथ क्रेडिटहरू सिर्जना गर्नुहोस्। प्रीमियरको साथ तपाईंको भिडियोमा क्रेडिटहरू थप्नुहोस्।
फोटोशपमा स्पट फोकस केहि फोटोमा बाहिर देखिनको लागि
फोटोशपमा कुनै चीज हाइलाइट गर्न फोटोकपको साथ एक पोइन्ट दृष्टिकोण भनेको फोटोग्राफरहरू द्वारा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने तरिका हो। तपाईंको छविहरूमा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू हाइलाइट गर्नुहोस्।
एक धेरै प्रभावशाली दृश्य सौंदर्यको साथ एक आकर्षक फोटो प्राप्त गर्न को उद्देश्य संग फोटोशप मा एक सपना प्रभाव संग फोटोग्राफी।
InDesign को साथ बुकमार्क सिर्जना गर्नुहोस्
InDesign को साथ द्रुत र सजिलैसँग बुकमार्क सिर्जना गर्नु सम्भव छ ठूलो ईजाईका साथ धन्यवाद जुन InDesign ले हामीलाई काम गर्न अनुमति दिन्छ।
एक वास्तविक तरीकामा फोटोशपको साथ मोडल छाया र प्रकाशहरू र व्यावसायिक तरीकामा तपाईंको सबै फोटोग्राफिक रीचिंगमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्दछ।
छिटो र सजिलैसँग फोटोशपमा एनिमेटेड GIF कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा फोटोशप र यसको भिडियो उपकरणलाई धन्यवाद कुनै समस्या नै छैन।
ठूलो दर्शकहरूमा पुग्न सही रूपमा पोष्टर डिजाइन गर्नु निस्सन्देह हरेक डिजाइनरको ठूलो लक्ष्य हो। पोस्टर कसरी बनाउने सिक्नुहोस् जुन वास्तवमै काम गर्दछ।
साधारण फोटो लिनु र फोटोशपको माध्यमबाट यसमा हास्य प्रभाव प्राप्त गर्नु भनेको यी steps चरणहरूलाई धन्यवाद प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा सजिलो कुरा हो।
इण्डिसाइनमा मास्टर पृष्ठहरूको साथ सम्पादकीय डिजाइन कसरी गर्ने सबै प्रकारका ग्राफिक प्रोजेक्टहरू डिजाइन गर्न।
फोटोशपको साथ पुरानो फोटो पुनर्स्थापित गर्नुहोस् यसलाई नयाँ जीवन दिन। यी चरणहरूको साथ ती पुरानो बाल्यकालिक फोटोहरू सजिलो तरीकाले पुनर्स्थापना गर्नुहोस्।
समय बचत गर्न फोटोशपमा कार्यहरू सिर्जना गर्नुहोस्
सम्पादन प्रक्रियामा समय बचत गर्न फोटोशपमा कार्यहरू सिर्जना गर्नु राम्रो विचार हो जुन धेरै फोटोहरूमा उही रीचुच लागू हुन्छ।
यस गाइडका साथ फोटोशपमा फिल्टरहरू कसरी प्रयोग गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्
साना ट्रिक्सको साथ फोटोशपमा फिल्टरहरू कसरी प्रयोग गर्ने पत्ता लगाउनुहोस् जस्तै छविहरूका केही पक्षहरू लुकाउने वा तिनीहरूलाई हाइलाइट गर्ने।
एडोब प्रीमियर र भिडियो प्रभावहरू
एडोब प्रीमियर र पूर्वनिर्धारित भिडियो प्रभावहरू एक ठूलो सहयोगी हो जब यो भिडियो द्रुत र सजिलो सम्पादन गर्न आउँदछ। प्रीमियरको साथ आकर्षक भिडियोहरू।
छिटो र सजिलैसँग फोटोशपको साथ छालाको त्रुटिहरू सच्याउन सिक्नुहोस्। विज्ञापन र फेसनमा प्रविधिहरू जान्नुहोस्।
फोटोशप वा इलस्ट्रेटर जस्ता कुनै पनि प्लेटफर्ममा डिजाइनरहरूको लागि २,2500०० भन्दा बढी नि: शुल्क संसाधनहरू पत्ता लगाउनुहोस् र डिजाइन साम्राज्य प्राप्त गर्नुहोस्।
ब्लेन्डिंग मोड: तिनीहरूलाई कसरी सही तरीकाले प्रयोग गर्ने सिक्ने
फोटोशप सम्मिश्रण मोडहरू। २ unknown अज्ञात मोडहरू सही रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस् ताकि तिनीहरूलाई अनियमित रूपमा प्रयोग गर्नु अघि उनीहरू के हुन् भनेर तपाईंलाई थाँहा हुन्छ।
हामी तपाइँलाई तपाइँको ब्रान्डको साथ मकअप कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउँछौं। तपाईं धेरै आकर्षक परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईं हेर्न सक्नुहुनेछ कि कुनै ब्रान्ड केहि मिडिया माध्यममा काम गर्दछ वा गर्दैन।
कालो र सेतो र रंग फोटोग्राफी
तपाइँको छविहरूलाई रचनात्मक स्पर्श दिन कालो र सेतो र र color्गीन फोटोग्राफहरू प्राप्त गरेर सिन सिटी फिल्मको प्रभाव कसरी सिर्जना गर्ने सिक्नुहोस्।
फोटोशप आधारभूत: कसरी फोटोको अंश मेटाउने
हामी तपाईंलाई फोटोशपमा फोटोको अंश मेटाउने तरिका देखाउँदछौं सरल लेयर उपकरण र ब्रशको प्रयोग गरेर।
फोटोशप डिजाइन उपकरण मार्फत द्रुत र सजीलै धेरै तरिकाहरू सिक्नुहोस् र तपाईंको फोटोहरूलाई नयाँको रूपमा छोड्नुहोस्।
कटपास्ट (कोलाज प्रविधि)
हामी एडोब फोटोशप उपकरण प्रयोग गरेर भविष्य कोलाज बनाउनको लागि प्रयोगकर्ताहरूको लागि कोलाज प्रविधिको व्याख्या गर्दछौं।
एडोब फ्यूज कसरी प्रयोग गर्ने बारे मार्गदर्शन
तपाइँ अझै पनी जान्नुहुन्न कि एडोब फ्यूज कसरी प्रयोग गर्ने? यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र यस उत्कृष्ट ट्यूटोरियल पत्ता लगाउनुहोस् थ्रीडी क्यारेक्टरहरू सिर्जना गर्न र एक विशेषज्ञ बन्नको लागि।
यस ट्यूटोरियलमा मँ धेरै सरल चरणहरू वर्णन गर्दछु जुन तपाईं अनुसरण गर्नै पर्छ यदि तपाईं आफ्नो अनुकूलन फोटोशप ब्रशेस सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने।
कसरी एक सरल र रमाईलो क्रिसमस कार्ड Fotojet को साथ सिर्जना गर्ने
Fotojet एक निःशुल्क वेब उपकरण हो जुन तपाइँलाई मिनेटको एक मामलामा सुरुचिपूर्ण र सुन्दर क्रिसमस कार्डहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि तपाईंले फोटोशप सीसी २०१ in मा पुरानो "नयाँ कागजात" विन्डो सम्झनुभयो भने, त्यहाँ समाधान छ
यसको साथ २ years बर्ष पछि, पुरानो "कागजात सिर्जना गर्नुहोस्" विन्डो नयाँ, अधिक जटिलमा सारिएको छ। यदि तपाईं यसलाई फेरि पाउन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई कसरी देखाउने छौं।
Rotoscoping एक अद्वितीय प्रभाव को साथ एक सरल एनिमेसन तकनीक हो। हामी तपाईंलाई यो प्राविधिक प्रदर्शन गर्न सबै भन्दा आधारभूत उपकरण प्रयोग गर्न सिकाउँछौं।
यस साधारण ट्यूटोरियलको साथ हामी केही सरल चरणहरूमा इलस्ट्रेटरमा कसरी गुणस्तर बनाउने भनेर सिक्नेछौं, हामीलाई हाम्रो डिजाईनमा शैली प्रदान गर्न अनुमति दिदै।
कसरी वेबसाइट वेबसाइट मा छविहरू तौल कति मेगाबाइट जान्न
यदि तपाईं इभर्नोट प्रयोग गर्नुहुन्छ र यस अनुप्रयोगबाट पहुँच गर्न सक्षम हुन वेबसाइटलाई पूर्ण रूपमा बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई छविहरूमा यसको तौल कति छ भनेर जान्न सिकाउछौं।
फोटोशपको साथ हस्तलिखित लोगो बनाउनुहोस्
केही साधारण चरणहरूमा हामी हाम्रो हातले खिचेका लोगो स्केचहरू एक वास्तविक डिजिटलाइज्ड लोगोमा रूपान्तरण गर्न सक्दछौं।
यस पानीको रंग प्रभावको साथ हामी हाम्रो ग्रंथहरूमा केवल थोरै, अधिक आकर्षक र व्यावसायिक प्रभाव प्राप्त गर्न सक्दछौं र केहि सरल चरणहरूमा।
हामी तपाईंलाई एडोब फोटोशप सीसी प्रोग्रामबाट तपाइँले चाहानुभएका तस्बिरहरूमा मौं्युअल रूपमा भिन्टेज प्रभाव कसरी लागू गर्ने भनेर तपाइँलाई देखाउँदछौं
फोटोशपमा कालो र सेतो फोटो कसरी रंग्ने
एक विस्तृत ट्यूटोरियल जसमा हामी Adobe Photoshop CC मा कालो र सेतो तस्बिरको रंग लिनको लागि सबै चरणहरू समीक्षा गर्दछौं
एडोब फोटोशपमा पाठको रंग कसरी परिवर्तन गर्ने
एक ट्यूटोरियल जहाँ तपाईं फोटोशपमा छविको पाठको र change परिवर्तन गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसबाट अक्षरहरू पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
फोटोशपमा कसरी उन्नत तरीकामा छवि क्रप गर्ने
हामी सबै विवरणहरू समीक्षा गर्दछौं जुन क्रपिंग टूलमा Adobe Photoshop मा छ ताकि तपाईं यसको अधिक लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ
एडोब फोटोशपमा छविबाट पृष्ठभूमि कसरी हटाउने
यसलाई मेटाउन र Adobe Photoshop मा एक नयाँ समावेश गर्न छविको पृष्ठभूमि चयन गर्न धेरै उपकरणहरू छन्।
फोटोशप सीसीमा कसरी हेड्सलाई सजिलो तरिकामा बदल्ने
एडोब फोटोशप सीसीमा, प tool्क्ति उपकरणहरू प al्क्तिबद्ध गर्नका लागि धन्यबाद, तपाईं हेडलाई सरल र सजिलो तरीकाले परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई पछ्याउने चरणहरू देखाउछौं
टुल्स "डज" र "बर्न" को प्रयोग गरेर हाइलाइटहरू र छायाहरूको नियन्त्रण सिक्नको लागि एक ट्यूटोरियल
र find कसरी फेला पार्ने भनेर जुन हामीले छनौट गर्नुभएकोसँग पूर्ण रूपमा भिन्न छ
नमस्कार रaएक वेब उपकरण हो जुन र the पत्ता लगाउन काममा आउँदछ जुन कामको लागि छनौट गरिएकोसँग एकदम भिन्नता गर्दछ।
ट्यूटोरियल: कसरी Adobe Photoshop साथ वेब पृष्ठ लेआउट
हामी वेब साइटहरू एक पेशेवर तरीकाले लेआउट गर्न कसरी Adobe Photoshop को फाइदा लिन सक्छौं? यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाईंलाई यसलाई व्याख्या गर्दछौं!
यदि तपाईं क्याटलग, कुपन, मूल्य सूची वा कार्ड सिर्जना गर्न आवश्यक छ भने, स्पष्ट रूपमा माइक्रोसोफ्टबाट टेम्प्लेटहरूको एक ठूलो डिजाइनको साथ एक धेरै चाखलाग्दो अनुप्रयोग हो।